Saameynta ka dhalatay Fatahaadda webiga Shabeelle oo korodhay - BBC News Somali
Wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in roobabka da'aya xiligan gu'ga iyo fatahaadda webiga Shabeelle ay go'doomiyeen tobannaan tuulo oo ku yaalla gobolkaaasi.
Roobabkan iyo fatahaadahan iswata ayaa baabii'yay dalagii beeraha ee la filayay inay xiligan soo go'aan.
Boqolaal qoys ayaa guryahooda ka barakacay iyagoo isugu tagay maalaha taaga ah si ay uga nabad galaan fatahaadda webiga.
Dadka ku nool tuulooyinkan oo awalba ku tiirsanaa beeraha ayaa sanadkii hore uun markii ay dhamaatay fatahaaddii abuurtay dalagyo ay kamid yihiin sisinta, galayda iyo digirta, hayeeshee hadda oo ay joogaan xilligii ay guran lahaayeen ayaa waxa curtay roobabkii gu'ga oo sanadkan biyo badan keenay iyo webiga oo soo fatahay kuwaas oo qaaday dalagyadii u soo go'i lahaa. Qoysas badan ayayna fatahaadu barakicisay.
Xuseen Sheekh Maxamad waxa uu kamid yahay beeralayda ku nool bariga Jowhar, waxa uu BBC-da u sheegay in fathaadu u gaystay dhibaato balaaran oo aan la koobi Karin.
''Waxaa halkaan ka jira dhibaatooyin badan balse haataan waxaa inoogu daran Kaneeco, baahi badan iyo biyo nagu weegaarsan oo aan melena uga bixi Karin,'' ayuu yiri Xuseen Sheekh Maxamad.
Beeralaydu waxay sheegayaan in wali webigu biyo badan uu wado khatarna loogu jiro fatahaad kale oo uu sameeyo.
Roobab ka da'ay Muqdisho oo hakiyay imtixaanaadkii shahaadiga
Roobabka dabaylaha wata, daadadka soo rogmanaya iyo fatahaadaha webiyada ee guud ahaan Soomaaliya ayaa sababay dhimashada tobanaan ruux, xoolo badan oo le'day, iyo guryo dumay. Sidoo kale waxa jira bur bur soo gaaray kaabayaasha dhaqaalaha. Waxa jirta cabsi isa soo taraysa oo ku aadan in dhashaan cudurada faafa gaar ahaan maleeriyada iyo shubanka meelaha ay fatahaaduhu ka dhaceen.
Dad lagu qiyaasay 794,761 qof ayay saameeyeen daadka iyo fatahaadaha gobolada konfurta iyo bartamaha Soomaaliya ku yaala iyadoo 231,335 ay si kmg ah u barakceen sida ay sheegayso hay'adda qoxootiga ee qaramada midoobey.